राष्ट्रिय जागृतिको विजयी शुरुवात – Khel Dainik
राष्ट्रिय जागृतिको विजयी शुरुवात
सुन्दरहरैचा (खेलदैनिक) । शनिबारदेखि शुरु प्रथम प्रदेश स्तरीय खुला नकआउट फुटबल प्रतियोगितामा राष्ट्रिय जागृति क्लब, सुनसरीले विजयी शुरुवात गरेको छ । उद्घाटन खेलमा पंचायन फुटबल क्लबलाई २–० ले हराउँदै जागृतिले प्रतियोगितामा विजयी शुरुवात गरेको हो ।
सुन्दरहरैचा–९ मोरङ स्थित इन्द्रपुर रंगशालामा भएको उद्घाटन खेलमा जागृतिका लागि खामिर गिल्सन एक्लैले दुई गोल गरे । उनले खेलको ३५ र ६६औं मिनटमा दुई गोल गर्दै टोलीको जित सुनिश्चित गरे । खेलको म्यान अफ द म्याच पनि खामिर गिलसन नै घोषित भए । उनले पुरस्कार वापत नगद २१०० र ट्रफी हात पारे ।
यो जितसँगै राष्ट्रिय जागृति सेमिफाइनलमा समेत प्रवेश गरेको छ । प्रतियोगिता अन्तरगत फागुन २ गते आइतबारको खेल झापा फुटबल क्लब र पूर्वाञ्चल एपिएफबीच हुने आयोजकले जनाएको छ ।
त्यसअघि प्रतियोगिताको उद्घाटन सुन्दरहरैचा नगरपालिकाका नगर प्रमुख शिव प्रसाद ढकालले एक कार्यक्रमका बीच गरेका थिए । झरना युवा क्लब, सुन्दरहरैचा–९ बिराटचोकको आयोजनामा जारी प्रतियोगिताको विजेताले उपाधिसहित नगद १ लाख १,१११ रुपैयाँ हात पार्नेछ भने उपविजेताले ५१ हजार १,१११ रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ ।
प्रतियोगिताको फाइनल खेल भने यहि फागुन ७ गतेका दिन हुनेछ ।
← शिर्ष स्थानमा उक्लियो किरनको टोली पञ्जाब खनाल ब्रदर्श सेमिफाइनलमा →
आहा! रारा गोल्डकप दर्शकले रंगशाला मै गएर हेर्न पाउने फाल्गुन १, २०७७
कस्तो छ नेपालसँग भिड्ने मौरिसियन टिम ? फाल्गुन १, २०७७
नेपाल आइपुग्यो मौरिससको फुटबल टोली फाल्गुन १, २०७७
मच्छिन्द्र आहा! रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा फाल्गुन १, २०७७
राष्ट्रिय महिला फुटबल लिग स्थगित फाल्गुन १, २०७७
दावेदार मनाङ सेमिफाइनलमा फाल्गुन १, २०७७